ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အကူအညီ ကျောင်းဆောက်ခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်နေတဲ့ နအဖရဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအကြောင်း တစေ့တစောင်း (မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ) ~ ဒီမိုဝေယံ
ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အကူအညီ ကျောင်းဆောက်ခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်နေတဲ့ နအဖရဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအကြောင်း တစေ့တစောင်း (မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ)
ကိုဒီမိုရေ ဒီတစ်ခေါက်တော့ သတင်းတွေ တော်တော် နောက်ကျနေပါတယ်..။ ကိုဒီမိုရေ ဒီမှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးဖို့ တိုက်ရိုက်တစ်မျိုး သွယ်ဝိုက်တစ်မျိုး လုပ်နေကြတယ်လေ..။ ဒီတစ်လောအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပဲခူးကိစ္စတို့ ဘာတို့မှာ လူထုနဲ့ ကျွန်တော်တို့လို ဝန်ထမ်းတွေပါ.. တော်တော် ခံပြင်းနေကြတယ်လေ... မိုက်ရိုင်းတာ ကမ်းကုန်အောင်ပါပဲ..။ ဘီယာဆိုင်ထဲက ထွက်လာတဲ့ စစ်သားတွေက မမူးပဲ သုံးဘီးဆိုင်ကယ် မောင်းတဲ့ ကလေးတွေက မူးနေတာပါတဲ့ ရေးထားတာက ကြည့်ပါဦး.. ခုဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်တဲ့ စစ်ဗိုလ် စစ်သားကြတော့ ရုပ်လည်းမပြ နာမည်ဆိုတာကလည်း မှန်မမှန်သိရတာ မဟုတ်ဘူးလေ.. ပြည်သူကို စော်ကားတာကတော့ ကမ်းကုန်နေပါပြီ...။ ကျွန်တော်တို့ အကိုတို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ.. ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေ လည်းဖြစ်လာရင် အဆင်သင့်ပါပဲ.. ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးးတုန်းက ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဋ္ဌာန နှစ်ခုက ရွှေဝါရောင် ဦးဆောင် သံဃာတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး နေပြည်တော်အထိ ချီတက်ကြဖို့ လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးခဲ့ ကြတာပါ..။ ဒီကောင်တွေ အကြမ်းဖက်တာ လက်ဦးသွားလို့ပါ.. ခုလည်း ဖြစ်လာရင် ဝင်ပါဖို့ အသင့်ရှိနေတယ် ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်..။ ဒီကောင်တွေ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ ထက်ပျက်ဖို့ကို လုပ်နေသလိုပဲ ဗုံးတွေ့တယ်ပြောလိုပြောနဲ့ စကားတွေက တောင်ရောက် မြောက်ရောက်ပါပဲ.. အခုအချိန်မှာ ပြည်သူ့အစိုးရ ဆိုတဲ့စကားကလည်း ဝန်ထမ်းတွေ ကြားမှာ တီးတိုးပြောနေကြတာပါ..။ ဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့ အားလုံးဝိုင်းထောက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ...။
ကိုဒီမိုရေ ဒီတစ်ခေါက်တော့ မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၀၀ခုနှစ်ကျော်လောက်က ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အကူအညီနဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေလှူဖို့ ဂျပန်သံရုံးမှာ အခြေစိုက်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်က NGO အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ GREEN GRASS ASSOCIATION နဲ့ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံလေးကို ပြောပြပါမယ်..
၂၀၀၃ခုနှစ်လောက်က ဂျပန်က ODA နဲ့ ကျောင်းတွေ ဆောက်ပေးဖို့လာတဲ့ GREEN GRASS ASSOCIATION(GGA) က မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ဒေသတွေ ကျောင်းမရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ ကလေးတွေအတွက် စာသင်ကျောင်းတွေ အိမ်သာတွေ ဆောက်လုပ်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီက ကန်ထရိုက်ရပါတယ်.. GGA ကထင်တာက မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ဒေသတွေ မှာ ကျောင်းတွေ လိုအပ်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာပေါ့..။ တကယ် လက်တွေ့မှာတော့ ရန်ကုန်နဲ့ မလှမ်းမကမ်း မြို့နယ်တော်တော်များများမှာ ကျောင်းတွေ အိမ်သာတွေ ချို့တဲ့ ပျက်ဆီးနေတာ တွေ့ခဲ့ရတော့မှ သူတို့ ကိုယ်တိုင် စစ်အစိုးရရဲ့ ပညာရေးအတွက် ဘတ်ဂျက် သုံးစွဲမှု မရှိဘူးဆိုတာ လက်တွေ့ သိရှိလိုက်ရပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပြင်ပကုမ္ပဏီတွေကို ကန်ထရိုက်ပေးတယ် ဆိုတာကလည်း အာဏာပိုင်တွေကို အယုံအကြည် မရှိလို့ပါပဲ.. စစ်အစိုးရကို အယုံအကြည် မရှိတာရယ် ဖြတ်ညှပ်စားကြမှာကို အယုံအကြည် မရှိတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်...။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ ကျောင်းတွေ ကျောင်းတကယ် မရှိတဲ့ နေရာတွေကို ရှာပြီး ကျောင်းကော်မတီ ထောက်ခံစာတွေနဲ့ အတူ သံရုံးက GGA ကို ဓာတ်ပုံတွေ အထောက်အထားတွေနဲ့ တင်ပြရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြင်ပက တကယ်ဆောက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တကယ်ကျောင်းတွေ မရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ဆောက်တော့ အလေအလွင့်နည်းပြီး ကုန်ကျစားရိတ် သက်သာတာပေါ့..။ ကျောင်းတွေက အဲ့ဒီတုန်းက အနည်းဆုံး သိန်း၃၀၀ ကနေ သိန်း ၅၀၀ သိန်း ၆၀၀ ကုန်ကျတဲ့ ကျောင်းတွေပါပဲ..။ အဲ့မှာနောက်ဆုံး ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက ဝါးဖို့မြင်လာတော့တာပါပဲ.. နောက်ဘယ်လို ဥပဒေထုတ်လည်း ဆိုတော့ ကျောင်းတွေ ဆောက်ချင်ရင် ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနကို ဖြတ်သန်းပြီးမှ ဆောက်ခွင့် ပြုမယ်ဆိုပြီး ဖြစ်လာတော့တယ်လေ...။
အဓိက ပြသနာ ဖြစ်လာတာက မဝတ ရဝတ တို့က ဂျပန်က ဆောက်တဲ့ ကျောင်းတွေဆိုပြီး ကုမ္ပဏီကို ငွေညစ်.. ငွေတောင်း လုပ်လာတော့တာပါပဲ.. မပေးလို့မရတဲ့ အနေအထားတွေ ဖြစ်လာတော့တယ်လေ..။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်တာ ငွေရဖို့ အကျိုးအမြတ်ရဖို့ထက် ကုမ္ပဏီနာမည်ရဖို့နဲ့ နောက်တကယ် မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ လုပ်ပေးရတဲ့ အတွက် ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝတဲ့ ကျောင်းဆောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ.. GGA ကို အလုပ်သမားခ တစ်နေ့ဘယ်မျှ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းစားရိတ် စတာတွေ တွက်ချက်တင်ပြပြီး လုပ်ရတာလေ.. အဲ့မှာ မဝတဥက္ကဋ္ဌတွေက မပေးရင် ဆောက်ခွင့် လက်မှတ်မထိုးပေးတာတို့ ဂျပန်သံရုံးကို ကုမ္ပဏီနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သေချာမလုပ်ဘူး ဘာညာဆိုပြီး လိမ်လည်တိုင်ကြားကြတယ်လေ..။ တကယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မြို့နယ်မှာ ကျောင်းတစ်ကျောင်း အလကား လာဆောက်ပေးတာကို အကူအညီပေးရမှာ ဖြစ်သလို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရမှာလေ.. အခုတော့ ကိုယ်စားဖို့ ဝါးဖို့ပဲ စဉ်းစားပြီး ကပျက်ကယက် လုပ်ကြတာလေ..။ ကလေးတွေ တကယ်သနားစရာ ကောင်းတာပါ။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာတင် အများကြီး အိမ်သာက မရှိ အမိုးပဲရှိပြီး ထရံက မရှိ မိုးရွာရင် မိုးတွေကယို ထိုင်ခုံတွေက စုတ်ပြတ်နဲ့ အဲ့ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့က ရှာဖွေပြီး ဂျပန်သံရုံးမှာ တင်ပြရတာပါ...။ နောက်ဂျပန်သံရုံး GGAက လိုက်ကြည့် တကယ်လိုအပ်တယ် တကယ်ဆောက်သင့်တယ်ဆိုပြီး ခွင့်ပြုတာပေါ့..။ ကျောင်းတွေ့ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့လိုပဲ တခြားကုမ္ပဏီတွေကို လေလံပစ်ပြီး ဈေးအနည်းဆုံးနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို ဆောက်ခွင့် ပေးတာပေါ့.. ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ ကျောင်း ၁၀ကျောင်းလောက် ဆောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက အရာရှိကြီးတွေက သူတို့ဆီ ငွေမဝင်တော့ ကပျက်ကရက် လုပ်လာတော့တာပါပဲ... ဘာပြောလဲဆိုတော့ မင်းတို့က ဘာလို့ ကျောင်းဆောက်ပေးချင်တာလဲ.. ငါတို့တိုင်းပြည် ဒီလောက် မဆင်းရဲသေးဘူးကွ ဘာညာဖြစ်လာပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီတွေ ကျောင်းရှာတဲ့ အခါ ကျောင်းဆရာဆရာမတွေ ကျောင်သားမိဘတွေနဲ့ တွေ့ပြီးထောက်ခံချက်ယူ ကျောင်းဆောက်ဖို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေ ပညာရေးမှုးတွေဆီ ရောက်သွားတဲ့ အခါ ဆရာ ဆရာမတွေကို ခေါ်ဆူ နောက် အလုပ်ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်လာတာပါပဲ.. တကယ်နစ်နာတာကတော့ ကျောင်းသားတွေပါပဲ.. တက်ရင်နာဖို့ကေင်းပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် အဲ့ဒီတုန်းက မကွေးတိုင်းက တိုင်းပညာရေးမှုးနဲ့ စကားများခဲ့ရဘူးပါတယ်။ သူကပေးမဆောက်တော့ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ချို့တဲ့ပြီး ကလေးတွေအတွက် တကယ်လိုအပ်လို့ပါလို့ ပြောတော့ သူက ငါတို့တိုင်းပြည် ဒီလောက်မဆင်းရဲသေးဘူးကွ မင်းတို့ဆောက်ပေးမှ ကျောင်းဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးကွ ဘာညာဆိုပြီး လုပ်လာပါတော့တယ်..။ နောက်ဆုံး မကွေးတိုင်းက အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာ ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းဆောက်ခွင့် မရခဲ့ဘူးလေ အင်မတန်နစ်နာတာပေါ့..
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပညာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက သူတို့ဋ္ဌာနကို ဖြတ်ပြီးမှ ဆောက်ခွင့်ပေးမယ် ဆိုပြီး ဖြစ်လာတော့တယ်။ သူတို့ဆီကဖြတ်ရင် သိန်း ၃၀၀တန်ကျောင်းကို ၁၅၀လောက်နဲ့ ဆောက်ပြီး ၁၅၀ လောက်က သူတို့အတွက် ဖြစ်လာမှာလေ..။ စာရွက်စာတမ်းတွေလည်း ဖြတ်ညှပ်ကပ်တာတွေ ဖြစ်လာတော့မှာ။ သူတို့ဆီတိုက်ရိုက်ချပေးရမယ် သူတို့ကစီမံမယ်ဆိုတော့ ဂျပန်သံရုံးက လက်မခံတော့ဘူးလေ..။ နောက်ဆုံးကျတော့ ဒီစီမံကိန်းက ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရတယ်လေ.။ ဘယ်NLD ဘယ်အတိုက်အခံမှ ကန့်ကွက်လို့ ရပ်ဆိုင်းသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး...။ GGAကလည်း အစကတည်းက သူတို့က စုံစမ်းသိရှိပြီးသား သိပြီးသား အစိုးနဲ့လုပ်ရင် မသမာမှုတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ.. နောက်ဂျပန်သံရုံးက အပြင်က ကျွန်တော်တို့လို ကုမ္ပဏီတွေကို အရမ်းယုံတာလေ.. သံရုံးကကောင်းပြီး အစိုးရက မကောင်းတာလေ..။ နစ်နာတာကတော့ ကလေးတွေနဲ့ ပြည်သူတွေပါပဲ. ကိုဒီမိုရာ... ကျန်တဲ့ အခြားနေရာတွေမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ မင်းဆိုးမင်းညစ် မင်အစုတ်အပြတ်ခေတ် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ပါပဲ..။ နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ချစ်ဝန်ထမ်းတွေ နိုးကြားမှုရှိနေပါတယ် ဆိုတာပြောကြားပါရစေ။
ဆိုချင်တာက စစ်အာဏာရှင်တွေက နိုင်ငံတကာက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ဖြစ်တာဟာ NLD နဲ့ အတိုက်အခံတွေကြောင့်လို့ အမြဲစွပ်စွဲလေ့ရှိပါတယ်. တကယ်တမ်းကျတော့ အာဏာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကို ပိတ်ဆို့နေတာပါပဲ... တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ ရပိုင်ခွင့်တွေကို နိုင်ငံရေးလက်နက် အဖြစ် အသုံးချနေတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက် မြန်မာပြည်က လာတဲ့ စာထဲက (ရန်ကုန်က ဂျပန်နဲ့ ကားဖက်စပ် ထုတ်တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုမှ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟပြောဆိုချက် ပြန်ဖတ်ချင်ရင် Click) ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီက ပြည်သူတွေအတွက် ဈေးပေါပေါနဲ့ ကားအသစ်တွေ လိုသလောက် ထုတ်ပေးမယ့် ကိစ္စမှာလည်း ပိတ်ပင် တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ပြောသလို တိုင်းပြည်ကို စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့နေတာ ဟာလည်း ဒီအာဏာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ.. ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မကြားဘူးတဲ့ ခေါင်ခိုက်နေတဲ့ ကားဈေးတွေ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လက်ကိုင်ဖုန်း အိမ်ဖုန်းတွေကို ဒေါ်လာ ၅၀တောင် မပြည့်တဲ့ဈေးနဲ့ ဝယ်သုံးနိုင်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ခေါင်ခိုက်နေအောင် တမင်လုပ်ထားပါတယ်.. အင်တာနက် အမြန်နှုန်းတွေ တမင်လျှော့ချ မိမိအာဏာ တည်မြဲရေးအတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို တမင် ဓားပြဆန်ဆန် ပြန်ပေးဆွဲပြီး ဘယ်သူသေသေ ငတေမှာ ပြီးရော ဆိုသူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဝေစားမျှစားလုပ်နေတာပါပဲ.. ဒီလူတွေသာ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ရိုက်စားလုပ်ပြီး ဆက်လက် အာဏာတည်နေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်နဲ့ နောင်မျိုးဆက် မိမိတို့သားသမီးတွေ အတွက် ရင်လေးစရာပါပဲ.. တို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကျရတော့မှာလား..